मापदण्ड मिचेर प्लटिङ गरे कारबाही, जग्गा किन्दा के-केमा ध्यान दिने? :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जग्गाहरू अनधिकृत प्लटिङ कारोबारमा सरकारले रोक लगाउने भएको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड विपरीत तयार पारिएका प्लटिङ क्षेत्र खोजी गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बन्दै गरेका प्लटिङलाई मापदण्डमा ल्याउन प्रयास गर्ने, नभए कारोबार रोक्का राख्ने प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरण विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार उपत्यकामा दुई सय हाराहारीमा अनधिकृत प्लटिङ भइरहेको छ। स्थानीय तहको समन्वय र सूचनाका आधारमा ती स्थान पत्ता लगाइएको हो।
तोकिएको मापदण्डअनुसार भएका जग्गालाई अनुमति दिने र रोक्का फुकुवा गरिनेछ। त्यस्तै मापदण्डमा नपरेका र अटेर गर्नेलाई थप कारबाही हुनसक्ने उनले जानकारी दिइन्।
'प्राधिकरणको अनुमति बिना भइरहेको प्लटिङ क्षेत्र खोजिरहेका छौं। कारोबार रोक्न कित्ता नम्बर पत्ता थाहा पाउनु पर्छ,' आयुक्त ढकालले भनिन्, 'पहिले अनुमतिको दायरामा ल्याउँछौं। अनुमति पाउन मापदण्डअनुसार हुनै पर्छ। नभए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
मापदण्डअनुसार प्लटिङ क्षेत्रभित्र १५ प्रतिशत जग्गा बाटोका लागि छोड्नु पर्नेछ। यसमा भित्री सडक ६ मिटर र मुख्य सडकसँग जोडिएको सडक ८ मिटर हुनै पर्ने, ५ प्रतिशत क्षेत्रफल खुला राख्नुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा चलाउन नपाइने लगायत नियम छन्।
ढकालका अनुसार पहिले कित्ता पत्ता लगाएर जग्गा रोक्का राखिनेछ। त्यसपछि मापदण्डअनुसार कायम हुने गरी नयाँ डिजाइन तयार गरेमा मात्रै कारोबार फुकुवा हुन्छ। पटक पटक सूचना जारी गरी प्लटिङ परमिट लिन बोलाउँदा नआएकाले प्राधिकरण आक्रामक भएको समेत उनले जानकारी दिइन्।
'कतिपय स्थानमा घर बनिसकेका छन्, त्यसमा हामीले केही गर्न मिल्दैन। तर अहिले पत्ता लगाएका प्लटिङ मापदण्ड बाहिरका हुने छैनन्,' उनले भनिन्, 'मापदण्डमा नआए जग्गा रोक्का हुन्छ। थप कारबाहीबारे छलफल भइरहेको छ।'
पछिल्लो समय जग्गा कित्ताकाट हुने क्रम बढेको छ। घरजग्गाको कारोबारसँगै फागुन महिनामा कित्ताकाटको संख्यामा पनि वृद्धि भएको हो। सरकारले जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्न कडाइ गरे पनि यो आर्थिक वर्षमा साउनपछि फागुनमै सबभन्दा धेरै कित्ताकाट भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार फागुनमा १ लाख ६१ हजार ७ सय २ जग्गा टुक्रा पारिएको तथ्यांक छ।
मापदण्ड विपरीत बनेका प्लटिङमा कारोबार गर्दा उपभोक्ता झुक्किन पनि सक्छन्। सस्तोमा पाइयो भनेर हतारमा लगानी नगर्न प्राधिकरणले अनुरोध समेत गरेको छ।
काठमाडौंमा जग्गा किन्दा के-के ध्यान दिनेः
- फिल्डमा मात्रै होइन, नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो कायम गरेको छ वा छैन नापी र मालपोत कार्यालयमा जाँच गर्नुहोला, हेर्नुहोला।
- राजकुलो, खोल्सी ढाकेर, छोपेर, मिचेर बाटो कायम गरिएको त छैन, यसरी बनाएका बाटाहरू गैरकानुनी हुन्। यसबारे स्थानीयसँग जानकारी लिनुहोला।
- जग्गा खोला किनारभित्रको त होइन? जग्गा फिल्डमा एकातिर देखाइने नापी नक्सामा अन्यत्र भएर दुःख पाएका घटना प्रशस्त छन्। यसबारे जग्गा किन्ने बेलामा सावधानी अपनाए थप झन्झटबाट बचिन्छ।
- ढिस्को भासेर, पुरुवा माटोले सम्याइएको जग्गा त होइन? विचार पुर्‍याउनु पर्छ। घर बनिसकेपछि भासिएर दुःख पाइने हुन सक्छ।
- सार्वजनिक जग्गा मिचेर फिल्डमा बाटो कायम गरिएको प्लट ठूला देखाइ झुक्याइएको त होइन?
- जमिन भासिने, बग्ने, खोला पस्ने सम्भावना त छैन? भूक्षय, भूस्खलनका कारण घरजग्गा नै भासिएर दुःखद घटना प्रशस्त छन्।
- सडक विस्तार मापदण्ड अनुरुप बाटो विस्तारभित्र पर्छ कि?
- निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित सडक रेखांकनभित्र पर्छ कि?
- उच्च भोल्टेजका बिजुलीका तारमुनि त पर्दैन?
- दलदले र गहिरो खेत पुरेर घडेरी बनाइएको रहेछ भने त्यस्तो ठाउँमा भूकम्पको कम्पन बढी हुन्छ। यस्ता ठाउँमा बनाइने घरहरू माटो परीक्षण गरी विशेष खाले जग हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसो नगरेमा धन जनको क्षति हुनसक्छ। थप सावधानी अपनाउनु पर्छ।
- भूकम्प, आगलागीजस्ता अप्रत्यासित प्रकृतिक प्रकोपका बेला आपतकालीन उद्धारका लागि दोहोरो एम्बुलेन्स, दमकल चल्न अनिवार्य हुन्छ। बाटोको चौडाइ यस्ता साधनलाई दोहोरो आवतजावत गर्न पुग्ने भएमा सुरक्षित हुन र अस्पताल दौडाउन सजिलो हुन्छ। लगानी पूर्व भविष्यमा सम्भावित दुर्घटनाको पनि ख्याल गर्नुहोला।
- प्लटिङका आकर्षित घडेरीहरू भन्ने विज्ञापन प्रायः आइरहेका हुन्छन्। काठमाडौं, उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर प्लटिङ गरेको हो भने मात्रै निश्चिन्त भइ घर घडेरीमा लगानी गर्नुहोला।
- घर बनाउँदै हुनुहुन्छ वा सँधियारको घर बन्दैछ कि?
- तपाईं घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने नक्सा पास गरेर स्वीकृत उचाई अनुरूप मात्रै बनाउनु होला। मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर टहरा भत्काइने छन्।
- ख्याल गर्नुहोस्, यदि स्वीकृत मापदण्ड मिचेर छिमेकीले घर बनाउन लागेका छन् भने त्यसको मार तपाईं समेतलाई पर्छ। भूकम्प वा अन्य कारणले छिमेकीको घर भत्किँदा, आगलागी हुँदा तपाईं पनि जोखिममा पर्न सक्नुहुन्छ। घाम-हावा छेकिएर तपाईं पनि अस्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १५, २०७८, ०५:१५:००